Madaxweynihii hore ee soomaaliya Xasan shiiq Oo Ka hadlay Xaalada Balad-xaawo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 26 March 2018
muqdisho: ( mareeg News ) Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xiisada ka taagan degmada Beledxaawo, halkaasoo maalmahan ay Ciidamada Kenya ka wadaan howlo burburin ah oo ay ku hayaan guryaha shacabka, si ay uga qodaan gododka darbiga weyn ee ay dhiseyso.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ugu baaqay madaxda dowladda Federaalka inay gutaan mas’uuliyada dastuuriga ee ka saaran ilaalinta xuduudaha.
Sidoo kale waxaa uu dowladda Kenya u diray farriin, isagoo ka dalbaday in aan la danqin boogaha, sida arrintii horay u taagneyd ee Badda, isla markaana aan looga sii darin mid kale.
Halkan hoose ka akhriso qoraal Xasan Sheekh:-
Waa wax dabiici ah in laba dal oo daris ah ay Marar badan dhex marto kala aragti duwanaansho la xiriirta qaddiyadaha qaarkood.
Gabagabadii waxaan leeyahay “YAANNAAN NOQONIN DOQONTII U DAGAAL LA’AYD YAAN LAGAAGA DARIN”
Dekadda Muqdisho oo caawa lagu qabtay Kunteenaro la doonaayay in si qarsoodi ah lagu bixiyo (Maxaa ku jira)